Saa'udii Arabiyaan dubartoonni istaadiyeemii akka galaniif hayyamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Saa'udii Arabiyaan dubartoonni istaadiyeemii akka galaniif hayyamuufi
Goodayyaa suuraa Kabaja ayyaanaaf istaadiyeemii akka seenan yoo hayyamamuuf, mormiin mudatee ture
Dubartoota Saa'udii seerota ciccimoo saala adda baasan jala turaniif, hayyama konkolaachisummaa seena qabeessa argatan irratti bilisummaa dabalataa kennaaf tarkaanfiin kun.
Maatiin guutuu magaalota gurguddoo - Riyaad, Jiddaa, fi Dammaam keessa jiraatan istaadiyeemii seenu danda'u.
Ilmi mootii Saa'udii, Mohaammad Biin Islaam hawaasa Saa'udii ammayyeessuu fi diinagdee biyyattii guddisuuf shoora dursummaa taphachaa jira.
Abbaan Taayitaa Ispoortii Saa'udii istaadiyeemonni magaalota sadeenii jalqaba bara 2018 irraa kaasee maatii guutuu akka keessummeessaniif qophiin gamanumaan akka jalqabu beeksiseera.
Jijjiirama kana hubachuuf
Nama ganna 32 kan ta'an ilmi mootii Saa'udii, Mohaammad, 'Mul'ata 2030' jedhamee karoora beekamuun biyya gurgurtaa boba'aa irratti hirkatte kanaaf, jijjiirama diinagdee fi hawaasummaa fiduuf erga beeksisanii booda riifoormiin kun eegale.
Ji'a darbe, dubartoonni Waxabajjii dhufurraa kaasee yeroo jalqabaaf hayyama konkolaachisuu akka argatan hayyamamee ture. Agarsiisni muuziqaa kan jalqabe yoo ta'u, fiilmii agarsiisuunis dhihootti ni eegala jedhamee eegama.
Uummanni Saawudii %70 ta'u dargaggoota waggaa 30 gadi yoo ta'u, isaanis ''jireenya amantaan keenya wal danda'uu akka ta'e himu" qabaachuu qabna'' jedhaniiru jechuun dubbatu.
Sa'uudin dubartoonni akka konkolaachisan eeyyamuufi
Karoorri kun balaa qabaa?
Goodayyaa suuraa Jijjiiramoonni dhiheenya kana dhufan akkuma jiranitti, dubartoonni ammas wantoota hedduurraa ni dhorkamu.
Biyyattiin ji'a darbe dubartoonni kabaja guyyaa biyyaalessaa istaadiyeemii Mootii Riyaad, Faahiditti kabajame irratti akka hirmaataniif erga hayyamtee booda, biyyoota islaamaa irraa miidiyaa hawaasaa irratti mormiin gara garaa ishee mudatee jira.
Jijjiiramoonni dhiheenya kana dhufan akkuma jiranitti, dubartoonni ammas wantoota hedduurraa ni dhorkamu.
Yoo imaluu fedhan, akkasumas tajaajila yaalaa yoo barbaadan, dhiirri isaan waliin deemuu qaba yokiin ammoo barreeffama dhiira isaan bulchurraa kennameef qabachuu qabu.
Sa’uudi Arabiyaan dubartoota konkolaataa oofuu dhorkite kaasuufi